ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ အစ္စလာမ်သာသနာ ဘယ်လိုရောက်ရှိခဲ့ပါသလဲ? - News @ M-Media
ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ အစ္စလာမ်သာသနာ ဘယ်လိုရောက်ရှိခဲ့ပါသလဲ?
in ဆောင်းပါး / နိုင်ငံတကာသတင်း — July 1, 2012
၁၉၅၀-ခုနှစ် ဇွန်လ ကိုရီးယားစစ်ပွဲအပြီး ကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ ပါဝင်ရောက်ရှိလာတဲ့ တူရကီတပ်မတော်မှ ညီနောင်များမှ စတင်သာသနာပြုခဲ့တာပါ။ ၁၉၅၅-ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာ တပ်သားနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ‘ဇူဘာကောခ်ျ’ (Zubercoch) နဲ့ ‘အဗ္ဗဒူ ရာမန်’ (Abdul Rahman) တို့က ယာယီတဲတစ်ခု စတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်အဖြစ်အသုံးပြုကာ အစ္စလာမ်သာသနာကိုသင်ကြားပြသခဲ့ပါတယ်။ တူရကီတပ်မတော်က ဒုက္ခသည်စခန်းရွာတွေမှာ ယာယီတဲ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်များဖြင့် သာသနာပြုခဲ့ပါတယ်။ ပထမအဆင့်အနေဖြင့် ၁၉၅၅-ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ညီနောင်များက အစောပိုင်းမှာ Korea Muslim Committee ကို စတင်အကောင်အထည်ဖော်ပါတယ်။
၁၉၆၁-ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာ မလေးရှားနိုင်ငံမှ လွှတ်တော်အမတ် ‘အိုဗိုင်ဒူလာ’ ဦးဆောင်တဲ့ ၁၄-ဦးအဖွဲ့ ၁၃-ရက် သာသနာပြုခရီးရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အချို့ ကိုရီးယားမွတ်စလင်များကို မလေးရှားနိုင်ငံ မွတ်စလင်ကောလိပ်သို့ စေလွှတ်ပြီး ပညာသင်ကြားပေးတယ်။ ၁၉၆၂-ခုနှစ် ဩဂုပ်လမှာ ဒုဝန်ကြီး Tunku Abdul Rahman ဦးဆောင်တဲ့ သံတမန်အဖွဲ့ဟာလည်း သွားရောက်လေ့လာခဲ့ပြီး မလေးရှားအစိုးရမှ ‘ဆိုးလ်မြို့’၌ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်တည်ဆောက်ရန် Korea Muslim Community သို့ ဒေါ်လာ ၃၃၀၀၀ လှူဒန်းခဲ့သော်လည်း ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနဲ့ အခြားအခက်အခဲများကြောင့် အပြီးမသတ်နိုင်ခဲ့ပါ။ ၁၉၆၃-ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှာ မလေးရှားအစိုးရအရာရှိတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Haji Muhammad Nur ကလည်း သာသနာပြုလုပ်ငန်းများ သေချာစွာလုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ မလေးရှားအစိုးရကို တိုက်တွန်းကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။
၁၉၆၇-ခုနှစ် မတ်လ ၃-ရက်နေ့မှာ အစိုးရခွင့်ပြုချက်နဲ့ Korean Islamic Foundation ကို စတင် မှတ်ပုံတင်တည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပြီး သာသနာပြုလုပ်ငန်းအား အရှိန်အဟုန်ဖြင့် လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာလုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
၁၉၆၀-ခုနှစ်မှာ ‘Subri Seo Jung Gil ‘ ဦးဆောင်ပြီး ပထမဆုံးအကြိမ် ‘ဟဂ်ျ’ပြုနိုင်ခဲ့တယ်။ ၁၉၇၈-ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှာ မွတ်စလင်ဦးရေ ၁၃၂-ဦး ‘ဟဂ်ျ’ပြုနိုင်ခဲ့ပြီး ၁၉၇၉-ခုနှစ်မှာ ၁၀၄-ဦး ‘ဟဂ်ျ’ပြုနိုင်ခဲ့တာဟာလည်း ကိုရီးယားမွတ်စလင် သာသနာပြု လုပ်ငန်းအား ပိုမိုအားတက်အရှိန်ရစေခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၇၄-၁၉၈၀ ခုနှစ်ကာလ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ တိုးတက်ကြီးပွါးထင်ရှားလာမှု (Boom of Middle East) ဟာလည်း ကိုရီးယားမွတ်စလင် သာသနာပြုလုပ်ငန်းအား အာရုံစိုက်မှုရရှိစေခဲ့ပါတယ်။
၁၉၇၄-ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှာ သမ္မတကြီး Park Jung Hee ကဦးစီး၍ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်တည်ဆောက်ရန် စကွဲမီတာ ၁၅၀၀ ရှိ မြေကွက်အား လှုဒါန်းခဲ့ပါတယ်။
ဆိုးလ်မြို့ရှိ ဗဟိုဗလီ Photo- http://en.wikipedia.org
၁၉၇၆-ခုနှစ် မေလမှာ ‘ဆိုးလ်မြို့’၌ ‘ဗဟို ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်’ (Central Masjid) ကိုတည်ဆောက်ပြီးစီးနိုင်ခဲ့ပြီး Islamic Center ကိုလည်း ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တာဟာ ကိုရီးယားမွတ်စလင်တို့အတွက် ကြီးမားသောအောင်မြင်ပြောင်းလဲမှုကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သာသနာဝင်အရေအတွက်လည်း တိုးတက်များပြားလာခဲ့ပါတယ်။
ပထမဆုံး ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ နိုင်ငံရပ်ခြားဂုဏ်သရေရှိပုဂ္ဂိုလ်များအပြင် ဝန်ကြီးချုပ် ‘Choi Gyu Hwa’ ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက် အစ္စလာမ်သာသနာအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုဟာလည်း တိုးတက်များပြားလာပါတယ်။
၁၉၇၆-ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှာ ဘူဆန်မြို့မှာ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော် တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံမှာလည်း ကိုရီးယားအစ္စလာမစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာန ဖွင့်လှစ်ထားရှိနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၇၈-ခုနှစ် ဧပြီလမှာ အခြားမြို့တစ်ခုမှာလည်း ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၈၀-ခုနှစ် မေလ နှစ်နိုင်ငံထိပ်သီးအစည်းအဝေး၌ ဝန်ကြီးချုပ် ‘Choi Gyu Hwa’ က ဆော်ဒီဘုရင် ‘ခါလစ်ဒ်’ အား ‘ကိုရီးယား အစ္စလာမစ် ကောလိပ်’ ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် မြေကွက်လှုဒါန်းဖို့ ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၀-ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာ ‘ဘူဆန် အလ်ဖာတာ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်’ နဲ့ ၁၉၈၁-ခုနှစ် ဇွန်လမှာ ‘ဂွမ်ဂျု ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်’များ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ၁၉၈၆-ခုနှစ် ဧပြီလမှာ ‘အန်ယန် ရာဘီတာ အလ်အလမ် ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်’ နဲ့ စက်တင်ဘာလမှာ ‘ကျွံဂျု အဘူဗကရ်ဆီဒက် ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်’ များ ထပ်မံဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၉၀-ခုနှစ်မှာ ‘စူလ်တန်ဘင် အဗ္ဗဒူအဇစ်’ အခြေခံစာသင်ကျောင်း (Madrasah) ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၉-ခုနှစ် မေလမှာ ပထမဆုံး အစ္စလာမစ်မူလတန်းကျောင်း (Elementary School)ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ နောင်အခါ အထက်တန်းကျောင်း၊ တက္ကသိုလ်တို့အပြင် ယဉ်ကျေးမှုဌာနများလည်း ဖွင့်လှစ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ဆော်ဒီအာရေဗျ သံအမတ်ကြီး ‘အဗ္ဗဒူလာ အလ်အိုင်ဖန်’ ဆော်ဒီအာရေဗျအစိုးရကိုယ်စား Korea Islamic Foundation သို့ ဒေါ်လာ ၅-သိန်း ပေးအပ်လှုဒါန်းခဲ့ပါတယ်။
အီရတ်စစ်မြေပြင်သို့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း အစ္စလာမ်သာသာကို ကူးပြောင်းသက်ဝင်ယုံကြည်လာသူ ကိုးရီယားစစ်သား ၃၇ ယောက် More News-
၂၀၀၇-ခုနှစ် စာရင်းဇယားများနဲ့ Korea Islam Institute ဥက္ကဌ Lee Hee Soo ရဲ့ပြောကြားချက်အရ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ မွတ်စလင်ဦးရေ ၄၀၀၀၀-ကျော်ရှိနေ ပါပြီ။
(စကားချပ်။ ။ တောင်ကိုရီးယားမိတ်ဆွေတစ်ဦးရဲ့ မကြာသေးမီက ပြောပြချက်အရ အစ္စလာမ်သာသနာဟာ အလျင်အမြန်ပြန့်နှံ့နေကြောင်း ဝမ်းသာအားရ သိရှိရပါတယ်။)
လင်းယုန်နက် (ခြင်္သေ့မြို့တော်) ရှာဖွေစုဆောင်းတင်ပြသည်။